Moramanga : Nahazo tsena moderina goavana -
AccueilRaharaham-pirenenaMoramanga : Nahazo tsena moderina goavana
24/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsena goavana sy moderina indrindra manerana an’i Madagasikara, na ny faritra oseanina indianina no napetraka sy notokanan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tao Moramanga omaly, vokatry ny fiaraha-miasa amin’ ny orinasa Ambatovy . Raha ny fanazavana azo dia Rivodoza ny tsena, ary mahazaka mpivarotra hatrany amin’ny arivo any ho any, mirefy 6 400 metatra toradroa, ary misy rihana ihany koa. Ankoatra izay dia miisa efatra ny tsena, ka misy ireo izay efa misy talantalana ivarotana, ary misy ireo izay misy irony antsony hoe BOX irony; ety ivelany rahateo no misy ireo fiantsonan’ny fiara miandry ireo mpiantsena. Mitentina hatrany amin’ ny 10 Miliara Ariary ny teti-bidin’ ny fanamboarana, ary tafiditra indrindra amin’ ilay antsoina hoe FIS, na ny tahirin’Ambatovy ho an’ny tetika sosialy sy ny fotodrafitrasa, izay notokanana omaly ity, ary iray amin’ ireo 17 izay mbola hotanterahina. Raha ny vola natokan’izy ireo amin’ ireo tetikasa ireo moa dia mitentina 25 tapitrisa Dolara, ka ny vao ny 3 ,5 tapitrisa Dolara io vao nampiasaina io . Marihina fa efa nisy ireo mpivarotra teo amin’io toerana io teo aloha, saingy nafindra ny toeran’izy ireo noho ny asa fanamboarana. Izy ireo rahateo no lohalaharana amin’ny mahazo ny tsena, ka ireo mpivarotra hafa dia efa andalana ny fandinihina ny fampidirina ireo mpivarotra hafa izay maniry hivarotra anatin’ny tsena, izay ny kaominina nomena ny fitantanana ny tsena no handinika izany. Nambaran’ny ben’ny tanànan i Moramanga Rasolonjatovo nandritra ny fandraisam-pitenenany fa “miasa tokoa ny filoham-pirenena matoa tojo amin’izao asa azo tsapain-tanana izao ; satria fony izy minisitra no nanao ny sonia fifanarahana, ary izao tojo amin’ izao fanokanana izao rehefa filoham-pirenena izy’’ hoy hatrany ny ben’ny tanàna.
Nandritra ny fanokanana rahateo dia nanambara ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa “fotodrafitrasa maharitra io ary tsy farany io akory, anjaran’ny fanjakana no mitondra fotodrafitrasa tahaka izao, izay ny vahoaka no hisitraka izany. Izao ihany koa ny vokatra azo avy amin’ny fiaraha-miasa amin’ireo orinasa tsy miankina ‘’ hoy ny filoha. Ankilany anefa dia nilaza ny filoham-pirenena fa ny fotodrafitrasa tahaka izao , dia fototra iray amin’ny fampandrosoana satria dia ao no hifanakalozana sy hifaneraserana’’. Noho izany dia nampita hafatra ihany koa ny filoham-pirenena ny amin’ny tokony handraisan’ny rehetra anjara amin’izay tandrify azy ; indrindra ny lafin’ny fampandrosoana fa tsy variana ny hitsikera fotsiny ihany “betsaka indray izao no hiteny hoe io fotsiny ve no vita ; fotodrafitrasa fototra io, ary anjaran’ny fanjakana no mitondra fotodrafitrasa ho an’ny fampandrosoana . Ny fifanoloran-tanana no ilaina, na sehatra inona io, na sehatra inona, noho izany aza variana fotsiny mitsikera fa raiso ny andraikitrao izay tandrify anao na aiza na aiza satria dia efa fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana izany. Izany ihany koa no tokony hifaninanana fa tsy variana manakiana na mitsikera” hoy ny filoham-pirenena. Fa efa niresaka izany fampandrosoana izany ihany ny filoha, dia nilaza ny tenany fa efa misokatra ny tsena anatiny, ka tokony himasoana ihany koa ny any ivelany “ tokony hampitomboina ny vokatra, ary tokony hitodika amin’ ny tsena any ivelany toa ny any amin’ ny oseanina indianina sy afrika isika; satria dia miandry antsika izy ireo” hoy hatrany ny fanazavana izay nentiny. Mikasika ny fitantanana ny tsena moa dia nanome toromarika ny filoha’’ tantano tsara anaty mangarahara izao tsena izao, ary tadiavo hatrany ny fahatokisan’ny vahoka.
Anisan’ny nambaran’ny ben’ny Tanànan’ i Moramanga ihany koa ny mbola tsy fahazoan’ izy ireo ny tamberin’andraikitra, ary niantsoany ny filoham-pirenena izany. Ny filohan’ny antenimieram-pirenena Rivo Rakotovao ihany koa dia nanao antso avo manoloana ny filoham-pirenena ny amin’ ny tokony hanomezana ireo tamberim-bedy ho an’ny kaominina, izay andalovan’ny pipeline mba ahafahan’ izy ireo mamokatra tetikasa ho an’ny vahoaka. Mba ahafahana manao izany moa dia nilaza ny filohan’ny Antenimieran-doholona fa’’ raha misy ny fanahiana amin’ ny mety tsy fahafahan’ireo kaominina mitantana ny volany dia tsara, ary tsy mampaninona no manome fiofanana ho azy ireo” hoy i Rivo Rakotovao. Mazava rahateo ny valintenin’ny filoham-pirenena manoloana izany fangatahana izany “efa andalana ny fikarakarana izany amin’izao fotoana izao; efa nanome baiko ao, ary haingana izany dia hivaly’’. Manoloana izany fanomezan-toky nataon’ny filoham-pirenena izany dia ankafaliana no nandraisan’ny mponin’i Moramanga ny valin’ny fangatahana izay nataon’ireo tompon’andraikitra.
Mpampianatra : Manohy ny fanaovana sorona ny zana-bahoaka
Tsy hisy ny fanadinam-panjakana ara-panantanjahantena BEPC sy Bacc eto Antananarivo raha toa ka mbola tsy mivaly ny fitakian’ireo mpampianatra manao fitokonana amin’izao fotoana izao, hoy ireo tompon’andraikitra eto Antananarivo, omaly. Nambara fa miankina tanteraka amin’ny ...Tohiny
37 taona aty aoriana:HIVERINA NY FANAMBOARANA BALA